အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ Grab နဲ့ Samsung တို့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုး – AutoMyanmar
အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ Grab နဲ့ Samsung တို့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုး
Grab ဟာတော့လက်ရှိအရှေ့တောင်အာရှမှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ Mobile ငွေပေးချေမှုစနစ်မှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ကရပ်တည်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ Samsung electronic ဟာလည်း Mobile မာကတ်မှာသာမက လျှပ်စစ်ပစ္စည်း မာကတ်မှာရောထိပ်ရောက်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအင်အားကြီးအောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုတို့ဟာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိုးမြင့်လုပ်ဆောင်ဖို့ နှစ်ရှည် MOU တစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပူးပေါင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီ လ ၂ ရက်နေ့မှာ Samsung Electronic ကကြေညာခဲ့တာပါ။
Grab အနေနဲ့ Samsung နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ သူရဲ့ ယာဉ်မောင်းသူတွေနဲ့ စီးနင်းမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပိုမိုအဆင်ပြေအောင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Samsung အနေနဲ့ကတော့ Grab နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Samsung ထုတ်ကုန်သုံးစွဲသူတွေကို ပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်အောင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာတွေအသုံးပြုပြီး လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်လို့ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ လို့ပဲဆိုရမှာပါ။
Sangchul Lee, President and CEO, Samsung Electronics, Southeast Asia & Oceania,said, “Here at Samsung, developing meaningful innovations for the betterment of our consumers’ lives is always at the heart of what we do. We believe in the Internet of Things; the various benefitsamore digitally connected world brings, and we are excited to be partnering Grab to provide consumers within the region an enhanced array of digital solutions for their everyday needs. Through this collaboration, we hope to explore how we can work together to tap into the massive growth opportunity of Southeast Asia’s digital economy.”
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ Grab ရဲ့ CEO နဲ့ Co-founder ဖြစ်သူ Anthony Tan နဲ့ Samsung Electronics ရဲ့ President နဲ့ CEO ဖြစ်သူ Sangchul Lee တို့ရဲ့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးမှုအပေါ်အမြင်၊ ဒစ်ဂျစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရတဲ့ အကြောင်း အစရှိတာတွေကို ပြောကြားချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Grab အနေနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာ Samsung နဲ့စတင်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့လဲပြောကြားထားပါသေးတယ်။ Grab ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကမှစတင်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး အခုလက်ရှိ တော်တော်များများကယုံယုံကြည်ကြည်အားကိုးနေရတဲ့ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Corporation, Grab, Samsung